गृहमन्त्रीकै आडमा तस्करी - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
Published On : १८ चैत्र २०७४, आईतवार ०७:३४
जनप्रतिनिधिकै सक्रियतामा ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–८ डुकुछापस्थित बागमती नदीको किनार कटान गरेर धमाधम बालुवा निकासी भइरहेको छ। उक्त वडाका वडाध्यक्ष सुकबहादुर लामा, स्थानीय दिनेश लामा, सञ्जीव अधिकारीलगायतको टोलीले नदीको बहाव फर्काएर अवैध रुपमा बालुवा तस्करी गरिरहेको हो।
कुरा हुँदै गर्दा मोटरसाइकलमा प्रहरी आइपुगे । प्रहरी पुग्नासाथ हामीलाई घेरेका सबै तितरबितर भए। हाम्रो मन पनि प्रहरीलाई देख्नेबित्तिकै शान्त भयो । प्रहरी आएपछि दनुवार बस्ती पुग्ने निर्णय भयो। त्यसपछि हामी फेरि अवैध बालुवाखानी सञ्चालन भएको ठाउँ पुग्यौं। प्रहरीले सुरक्षा दिने भएपछि हामीले त्यहाँ फोटा खिच्यौं । बालुवा बोक्ने गाडी नम्बर टिप्यौं। खानी सञ्चालकहरु हामीलाई हेरिरहेका थिए । फोटो खिचेपछि हामी खानीबाट निस्कियौं। त्यहाँबाट २ मिनेट उकालो लागेपछि हाम्रो अगाडि सातवटा बाइक तेर्सिए। ती बाइकमध्ये बीचकोमा गोदावरी नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष सुकबहादुर लामा थिए। ती बाइकले हाम्रो बाटो छेके। प्रहरीलाई पनि अघि बढ्न दिएनन्। उनीहरुले तपाईंहरु पत्रकार हो? भन्दै चर्को स्वरमा सोधे। हामीले केही बोलेनौं। त्यसपछि ती पल्सर बाइकमा वडाध्यक्षसँगै आएकामध्ये केही हातपात गर्न हाम्रो नजिक आए। प्रहरीले उनीहरुलाई रोक्ने प्रयास गरे। हामी सडकको छेवैबाट बाइक ढल्काएर अघि बढ्यौं। हाम्रो पछिपछि प्रहरी आइरहेका थिए। त्योभन्दा पछि तीनै तस्करहरु पछ्याउँदै आइरहेका थिए। उनीहरुले हामीलाई भैंसेपाटीसम्म पछ्याए। हामी प्रहरी स्कर्टिङमै जाउलाखेल आयौं। news source nagariknews.com